Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Automotive အလုပ်အကိုင်များ
မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု Jobs in Myanmar
မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု အလုပ် 34 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
Fleet Supervisor (Avis Car Rental Service)
1. ယာဉ်အားလုံးကို နေ့စဉ်စ်ဆေးရမည်။ 2. ယာဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံရမည်။ 3. အပတ်တိုင်း ယာဉ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အချိန်ဇယားကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရမည်။ 4.Vehicles License သက်တမ်းတိုးခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ 5.Manage Driver Team. 6.Weekly Report to Ops Manager. 7.Dealing with Suppliers(Car Owner, Car Workshop & Spare Parts,Insurance and Other Thirt Parties) 8.Handling vehicle license process (YGN Plates Number, Foreigner License etc.,). 9.Looking for Vehicle Rental Suppliers. 10. Dealing with customer for car usage . 11.Manage Vehicle Delivery and Car Replacement , Vehicles Allocation. 12. Handling Accident Case (Insurance, Hospital, Thirt Party & Police). 13.Weekly & Monthly summarize for supplier invoicing , Maintainance Records & Accident Records as well.
အကျိုးအမြတ်: - Ferry ပေးပါသည်။ - Mobile allowance နှင့် - နှစ်အလိုက် ဘောနပ်စ်နှင့် incrementရှိမည်။
~ဖိုင်ဘာကုံးကော့နိုင်ရမည်။ ~ဆွဲစက် ဖြောင့်စက် အသုံးပြုတတ်သူ ဦးစားပေးမည်။
အကျိုးအမြတ်: လစာညှိနှိင်း နေစားငြိမ်း
-လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည် - ကားတွင် ဖြစ်တတ်သော အပြစ်အနာအဆာ (Fault finding/trobleshooting) ရှာဖွေရေး ကျွမ်းကျင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: ~လစာညှိနှိင်း နေစားငြိမ်းစီစဉ်ပေးသည်။
Angel Queen Co.,Ltd
ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္စြာ ရိုက္ႏိုင္ရမည္ အေၾကြးေတာင္းသြားလာႏိုင္ရမည္ Microfinance တြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူဦးစားေပးမည္
အကျိုးအမြတ်: ရုံးခ်ိန္ - မနက္ (၈း၃၀) မွ ညေန (၆း၀၀) နာရီ
စက်ပြင်ဆရာသည် အကြီးစားစက်ကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပြင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြားသော အထွေထွေအလုပ်များကို တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လေးလံသော စက်ပစ္စည်းများတွင် ထရပ်ကားများ၊ ဘီးတပ်စက်များနှင့် အခြားလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
Recruiter active 33 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
- Company product များအကြောင်းကို Customer သို့ စိတ်ရှည်စွာ ရှင်းပြနိုင်ရမည်။ - Computer (Myanmar,English Font ) ကောင်းမွန်စွာ ရိုက်နိုင်ရမည်။ - Facebook Page ကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အချိန်နှင့် တပြေးညီ Facebook တွင် customer ၏ comment ကို reply ပြန်နိုင်ရမည်။
~Scan Tools များကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ~ကားပြစ်ချက်များ တိကျမှန်ကန်စွာ ရှာဖွေစစ်ဆေး ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ ~ဝပ်ရှော့ဌာနရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ~အခြေခံလစာ+% ညှိနှိင်း နေစားငြိမ်းစီစဉ်ပေးသည်။
Production Group Leader (MDY)
ကားတပ္ဆင္ျခင္း မိမိအဖွဲရှိဝန်ထမ်းများအားစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဘာသာျပန္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ မႏၱေလး ျမိဳ႕သာ စက္မႈဇုန္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္
အကျိုးအမြတ်: - စားရိတ္ျငိမ္း
Administrative ( ရုံးစီမံခန့်ခွဲမှု)
Duties and Responsibility of Administrative in Mandalay - Handle of managing to Cleaner and Security’s tasks. - Handle of checking the office Building. - Recording Daily Attendance ( Leave , Late, Absent ). - To control daily process operation to be smooth. - Handle the Petty Cash. - Handle as sales admin and service admin. - Handle the regulations of Government and can go to the Related Government office.
အကျိုးအမြတ်: BENEFITS * Phone Bill *Uniform * Sat ( Half of day ) , Sunday and Gatzeette Holidays will of
Financial Specialist (YGN)
ဘဏ္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္
Accountant ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည် မႏၱေလး ျမိဳ႕သာ စက္မႈဇုန္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္
Accountant ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်
-သတ်မှတ်ထားသေ standard physical, mechanical and/or electrical measurementsများအရ ဝယ်ယူထားသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအချောထည်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရမည်။ -subassembliesများ သို့မဟုတ် အချောထည်ပစ္စည်းများကို လိုအပ်သလို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ -audit standards ကဲ့သို့သော document process နှင့် system audits လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြုလုပ်ရမည် -inspections နှင့် testing ရလဒ်များကို တိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ရမည်။ - ထိန်းချုပ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းဖိုင်များနှင့် စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းအားလုံးကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တိကျစွာ ထိန်းသိမ်းရမည်။ - စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် ပစ္စည်များအားလုံးကို ညှိနှိုင်းချိန်ညှိရမည်။ - အချောထည်ထုတ်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်။ - သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုနှင့်စံကိုက်ချိန်ညှိခြင်းသေချာစေရန် အရေးကြီးသောကိရိယာတန်ဆာပလာများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည်။ - Perform inspections, checks, tests, and sampling procedures of incoming materials, parts and components used in the vehicle modification & assembled, or finished of modified vehicle. - Perform review of Device History Records for release of finishedgoods. - Participate in the construction and/or revision of SOPs of the inspection function. -cAssist in the writing and updating inspection procedures, protocol and checklists. -cEvaluate problems and make initial recommendations for possible corrective action to supervise. - Work with production team and Quality team to provide feedback to assemblers regarding accuracy of assembly procedures. - Perform review of Device History Records and other documentation for compliance to established procedures and Good Documentation Practices.
- ကားလေးများပြင်နိုင်ရမည်။ - ကားစက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျွမ်းကျင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - ဖယ္ရီ -ယူနီေဖာင္း
Sales Girl (Automobile)
Converting showroom visitors into customers by understanding their needs and interests, and matching them to the most appropriate car. Understanding the characteristics, capabilities, and features of all cars, and providing the potential customer with detailed information, including comparing different competitive models. Taking customers on test drives and demonstrating vehicle features. Buildingarapport with potential customers to improve the possibility ofasale in the future. Maintainingacustomer database and communicating with them. Assisting customers with completing the relevant paperwork required forasuccessful sale to be processed. Collaborating with team members to reach sales targets. Assisting with the set up of showroom and promotional displays.
အကျိုးအမြတ်: - Commission - Travel allowance - Rewards for over performance
Accounting Software အသုံးပြုနို်ငရမည်၊ ဥပမာ - Peach Tree လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ အများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ဖယ်ရီ ရှိသည်
က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍ လုပ္ငန္းအေပၚစိတ္၀င္စားမႈရွိရမည္ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာမႈရွိျပီး ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ ရွိရမည္ ကား ၊ ဆိုင္ကယ္ ၊ သုံးဘီး ႏွင့္ ပက္သက္၍ လုပ္ကိုင္ဖူးပါက ဦးစားေပးမည္
စတိုခန်းထိန်းသိမ်းသူ | Store Keeper
1. ပစ္စည်းလက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ ဖယ်ခွာခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့် ဖောင်များ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ ရာသက်ပန်စာရင်းဝင်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ ပါ၀င်သော လုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါ။ 2. အစုရှယ်ယာများကို လှည့်ပတ်ပြီး ပိုလျှံနေသောပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရန် စီစဉ်ပါ။ 3. သိုလှောင်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သင့်လျော်သောစတော့ခ်အဆင့်များသေချာစေရန် မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းပါ။ 4. ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ စက်ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် အသေးစားပြုပြင်မှုများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။ 5. မေးလ်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ကယ်ရီယာဝန်ဆောင်မှုကို ကြီးကြပ်ပါ။
- ဧည့်သည်များအား လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ကြိုဆိုပါသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားခြင်း သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းခြင်း။ - ဝန်ထမ်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ဧည့်သည်များကို ညွှန်ကြားခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များပေးခြင်း။ - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်; ဧည့်သည်တံဆိပ်များထုတ်ပေးခြင်း။ - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် လုံခြုံပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ဧည့်ခံဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းပါ။ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ မမှန်မကန်မှုများ၊ လိုအပ်ချက်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်အဖွဲ့များကြားတွင် အဆက်မပြတ်အောင် ထိန်းသိမ်းပါ။ - အစည်းအဝေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးခန်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း။ - ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။ - တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားပြီး မက်ဆေ့ချ်များ သို့မဟုတ် ထပ်ဆင့်ခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
- ငွေပေးချေမှုများနှင့် အခြားသော ကတိက၀တ်စာရွက်စာတမ်းများကို အထောက်အထား သို့မဟုတ် အရောင်းအ၀ယ်ခွင့်ပြုချက်ကို ညွှန်ပြရန်အတွက် ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ - စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီထိန်းချုပ်မှုများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာမှုကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ - ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးရှင်းတမ်းများ၊ ပြေစာများ၊ ပြေစာများ၊ ချက်လက်မှတ်များနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ငွေလွှဲခြင်းဆိုင်ရာ အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ - ရှေ့နောက်မညီသော သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံမှုများကို ရှာဖွေရန် ပြေစာများ၊ ချက်လက်မှတ်များနှင့် ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကို ရှင်းတမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ - စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနှင့် စာရင်းကိုင်စံနှုန်းများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ ပုံစံများနှင့် ဌာနတွင်းအဖွဲ့အစည်းထိန်းချုပ်မှုများကို စစ်ဆေးပါ။ - ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အရင်းအမြစ်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အကဲဖြတ်ပါ။ - ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း စာရင်းစစ်တွေ့ရှိချက်များကို စီမံခန့်ခွဲရေးသို့ တင်ပြပါ။ - သတ်မှတ်ထားသော ဂိုဒေါင်များကို ပုံမှန်စတော့ခ်ယူခြင်း။ - နေ့စဉ်ဘဏ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှုကို ပြင်ဆင်ပြီး ငွေသားရေတွက်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။ - စာရင်းစစ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး သို့မဟုတ် မန်နေဂျာမှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း စာရင်းစစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ဆောင်ရွက်ပါ။
အကျိုးအမြတ်: -Uniform -Ferry -OT -Attendance
♦️Auto Mobile , Travels & Tour တွင် sales ဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ ♦️Internet ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ♦️ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်
Cargo Checker (ကုန်တန်ဆာ စစ်ဆေးသူ)
စာရင်းဇယားနိုင်နင်းရပါမည်။ အသင်းအဖွဲ့နှင့် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ နယ်မြို့များသို့လည်း သွားရောက် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
-Rental reservation အတည်ပြုခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ရမည်။ -Customerထံ ငွေတောင်းခံလွှာကို ပြင်ဆင်ပြီး ပေးပို့ရမည်။ -သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ နေ့စဉ် အရောင်းအစီရင်ခံရမည်။ -ယာဉ်မောင်း Attendance နှင့် overtime reportများ ပြင်ဆင်ရမည်။ - ရုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ာထိန္းသိမ္းျခင္းကို နားလည္သေဘာက္ရမည္ -Internal document processing -Manage office and vehicle supplies by taking care of physical goods and control sheet -Understand car rental business as well as vehicle brands/models/type -Understand hospitality business (customer service) -Possess good understanding of vehicle maintenance and cleanliness
တင်သောနေ့: 31 Oct 2021
- Store ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်း တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။ - စိတ်ရှည် သီးခံတတ်သူဖြစ်ရမည်။ - Company မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်ရမည်။ - လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်